भोलि खीर खाऊँ, के छ यसको महत्व ? – Asian Khabar
भोलि खीर खाऊँ, के छ यसको महत्व ?
काठमाडौ ।नेपाल चाडपर्व धेरै मनाइने देश हो । यहाँ सबै जातजाती, धर्म, संस्कृतीलाई समेटेर धेरै किसिमका पर्वहरु मनाइन्छ । सबै कुरालाई समेटेर चाडपर्व मनाइने गरिएको छ । दहि, मासु, खिचडी, सेल, घ्युचाकु, दहि चामल, दहि चिउरा, खिर आदि सबै कुरा खाने चाडपर्व हाम्रो देशमा मनाउने गरिन्छ । यि सबै चाडपर्व मनाउँदाका आ–आफ्नै विशेषता छन् । त्यसै गरि प्रत्येक वर्ष साउन १५ गते खिर खाएर चाड मनाउने गरिन्छ ।
पुर्खाहरुले हाम्रो देशमा यसरी नै संस्कृतीलाई जोगाइ राखेका छन् । यो हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धि हो । यसले देशको पहिचान बढ्नुका साथै पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पनि टेवा पुग्दछ । हाम्रो देशको संस्कृती भनेको विश्वको नमुना हो । यस्तो संस्कृती कतै पनि छैन् । तर अब भने यसको जर्गेनाको पाटो ठूलो कठिनाई छ । यसमा आम जनमानस सबैको चासो रहन आवश्यक छ ।
साउन १५ लाई देशैभर खिर खाने दिनको रुपमा चिनिने गरिन्छ । नेपालमा प्राचिन कालदेखि खिरलाई एक उत्कृष्ट खानाको रुपमा लिइन्छ। आर्युवेद विज्ञानमा समेत खिरको महत्व निकै रहेको पाइन्छ । यस दिन खिर खाएमा शुभ हुने मान्यता रहेको छ । यस महिनामा वर्षा हुने र विभिन्न किसिमका रोग लाग्ने र विरामी पर्ने हुँदा रोगबाट छुट्कारा पाउनको लागि पनि खिर खाने चलन रहेको पाईन्छ । खिरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हुने भएकोले खिर खाने चलन रहेको सुनिन्छ। वर्षायाममा चिसो हिलोले सर्दी लाग्ने र त्यसले विभिन्न संक्रमण ल्याई रोग लाग्ने गर्दछ ।
त्यसैले रोग नलागोस् र संक्रमण नहोस् , थकान नलागोस् , फुर्ति बढोस् , सर्दी हटोस् आदि भनेर मरमसला टन्न राखेर खिर खाने गरेको पाइन्छ । गर्मी महिना भएको कारणले शरिरमा दाद, खटिरा, घाउ, लुतो जस्ता रोगले दुःख दिने गरेको पाइन्छ। यि यस्ता रोगबाट बच्न प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउन साउन महिनामा दुध र दुधजन्य पदार्थको बढि नै सेवन हुने गरेको पाइन्छ ।गाउँघरमा मिठो मसिनो कमै खाईने र खान पनि कठिन हुने भएकोले खानामा सन्तुलित होस् भनेर हाम्रा पुर्खाले शरिरलाई आवश्यक पर्ने सबै खाले खाना खाने चाडपर्वको व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
यसले गर्दा सबै मानिसले दैनिक सबै किसिमका खाना खान नसक्ने र विशेष चाडपर्वमा मात्र खाँदा पनि निरोगी हुन मद्दत पुग्ने गरेको देखिन्छ । यि सब कुरालाई मध्यनजर गर्दा नेपालमा हाम्रा पुर्खाहरुले धेरै सोचबुझ गरेर चाडपर्वको महत्व विस्तार गरेको पाइन्छ । अनि आम नेपालीको खानाको प्रकार र मानिसको खानाको बानी जे भएता पनि देशका सबै भागमा खाइने सबै खानेकुराको सबैले स्वाद अनिवार्य लिने गरि कम्तिमा वर्षको एकदिन भए पनि खानु पर्ने गरि चाडपर्वको व्यवस्था मिलाएको पाइन्छ । बैज्ञानिक तरिकाले पनि यो अति नै उत्तम मानिन्छ ।
आजभोलि सबै किसिमका खानेकुराहरु सबै समयमा पाइने भएता पनि त्यसको सहि उपभोग भएको पाइन्न । यसले गर्दा अन्य धेरै समस्या उत्पन्न भएको पाइन्छ । त्यस कारण पहिले पहिलेका चाडपर्वले गर्दा सन्तुलन भोजनको लागि लाभदायक भएकोे देखिन्छ । आजकाल चाडपर्व फेसनको रुपमा पनि मनाउने गरेको पाइन्छ । स्कुल, कलेज, अफिसमा पनि साथीभाईहरु मिलेर खिर खाने चलन बढेको छ । यसरी साउन १५ मा देशैभर खिर खाने चलन भएकोले दुधको खपत पनि अरु दिनको तुलनामा लगभग ६ गुणा बढि हुने गर्दछ । दैनिक उत्पादनको दुधले नपुग्ने भएकोले डेरी उद्योगहरुले दुई चार दिन अगाडि देखि नै दुध भण्डारण गरि राख्ने र नपुगेमा धुलो दुध ( पाउडर दुध ) मिसाएर बजारमा लाने गरिन्छ ।
यस पटक भने कोरोना भाइरसका कारण यसको महत्व कम हुन सक्ने अनुमान देखिएकोछ । आम मानिरहरु गत सालको चैत्र ११ गतेबाट लगभग धेरै समय जस्तो लकडाउनमा रहेका र शहरबाट आम मानिस गाउँ घरतिर गएकाले पनि यस पटक पहिलेपहिलेको जस्तो दुध खपन नहुन सक्छ । संक्रमण बढिरहेकाले तत्काल पुर्ण रुपमा लक डाउन खुल्ने सम्भावना छैन । लक डाउन खुले पनि कोरोनाको प्रकोप झन बढ्ने भएकाले तत्काल नखुल्न सक्छ। त्यसैले धेरै मानिसहरु आ–आफ्नो काम छोडेर गाउँ घरतिर गएकाले गत वर्षहरुको जसरी यस पटक त्यति नमनाइन सक्छ । यो माहामारीका कारण शहरमा होटल,रेष्टुरेण्ट, स्कुल, कलेज, पार्टीप्यालेस, क्यानटिन आदि सबै बन्द भएका कारण दुधको खपत पनि कम छ ।
आजभोलि खपत कम भएकोले यस पटक पहिले पहिले जस्तो दुध त्यति अभाव नहुन सक्छ । आसा गरौं यस पटक सबै ठाउँमा आवश्यक मात्रामा दुध सहजै उपलब्ध हुनेछ। यसरी हामी आम नेपाली देशैभरी साउन १५ मा सबैजना खिर खाई साउन १५ भब्य रुपमा मनाउँदछौं । हामी सबै मिलि सबै किसिमका चाडपर्वको संरक्षण गरि हाम्रा भावि पुस्तालाई राम्रोसँग यस्ता सबै किसिमका चाडपर्वको महत्व बुझाउन सके यसले सकारात्मक सन्देश जानेछ । यसले हाम्रो देशको पहिचान दिनेछ । यसलाई सहि तवरले परिचालन गर्न सक्ने हो भने विदेशी पाहुना ल्याउन पनि मद्दत पुग्नेछ । हामीले अरुको देशको धर्म संस्कृतीको नक्कल गरेर आफ्नो देशका धर्म संस्कृतीलाई भुल्न हुँदैन । यस कुरामा हाम्रा सन्ततिलाई सधैं चनाखो राख्नुपर्छ ।लेखक- प्रल्हाद दाहाल नेपाल डेरी एसोसिएशन महासचिव हुनुहुन्छ।
Previous Pakistan govt. provides more than 43 million Nepali Rupees as financial assistance to Nepal
Next फेसियल हाउसले नागपञ्चमी थिममा फोटो शुट
खोप लगाएकाको क्युआर कोडसहित प्रमाणपत्रको शुल्क नलिन आग्रह